Naya Drishti | काेरोना भाइरस, हाम्रो अवस्था र भूमिका........ - Naya Drishti काेरोना भाइरस, हाम्रो अवस्था र भूमिका........ - Naya Drishti
टंक प्रकाश केसी
आज काराेना भाइरस संगै विश्व व्यवस्थामा एउटा बहस संगै फेरि लुटेरा दमनकारी पुजीवादी व्यवस्थामा संकट उत्पन्न भएको छ । साम्राज्यवादी पुजीवादी व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्थाका पक्षधरविच नयाँ धुर्विकरणकाे सुरुवात पनि भएको छ । पुजीवादी व्यवस्था मानवीय समवेदनाहिन , अमानवीय , क्रुर व्यवस्था हाे भन्ने कुरा आज साम्राज्यवादकाे नाइके अमेरिकाले देखाइरहेकाे छ ।
याे समवेदनाकाे समयमा विश्व समुदायमा मजबुत एकताको जरुरी छ । चिनले ठुलाे जनधन गुमाएको छ । चिन आज विश्व काेराना निराकरणकाे विषयमा सिकाउने प्रयास मात्र हाेइन कयौं अाैषधी , प्रविधि र डाक्टरहरु पठाएर इटाली लगायत, देशहरुमा थाेरै भएपनि मलिम पट्टी गर्दै विश्व समुदायमा एकता र मानवियताकाे संदेश प्रवाह गरेको छ । अमेरिका विश्व समुदायका अगाडि मुखदर्शक बनेकाे छ ।
आज साँच्चै पुजीवादी व्यवस्थाले मानविय जीवन आम जनता , नागरिक र विश्व समुदायको जिवन साेचिदिएकाे भए याे स्थिति सिर्जना हुने थिएन । उद्योग , कलाकारखाना, प्रदुषण , यन्त्र , यान , रकेट , क्षेप्याष्त्र परिक्षण त्यसको सहि र उचित व्यवस्थापन गरिदिएकाे भए हजारौं नागरिक ले ज्यान गुमाउन पर्ने थिएन । संगै विश्व समुदाय लड्नका निम्ति हतियार अणु बमकाे सट्टा मानवीय जिवनमा आइपर्ने संकटको तयारी अध्ययन गरिदिएकाे भए याे अवस्था सिर्जना हुदैन थियो । काेराना भाइरस आज मानवीय समवेदनाका रुपमा आएको छ ।
यसको कारक तत्व पुजीवादी व्यवस्था हाे। पैसाका निम्ति ,पैसाका लागि सबै गर्ने तयार हुने पुजीवादी चरित्र आज पुजिवादकाे घाँडाे बनेर जटिल रुपमा उभिएको छ । विश्वमा पुजीवादी व्यवस्था रहदासम्म कहिले अाफ्नाे अस्तित्व रक्षाका निम्ति भिषण युद्धका नाममा ,कहिले व्यापार युद्धका नाममा ,कहिले धर्मका नाममा ,कहिले भुगाेलका नाममा ,कहिले स्वास्थ्य महामारी ,कहिले भाेकमरि संगै विपत्तिमय जीवनयापन जिउन विवश तुल्याउने साम्राज्यवादीहरुकाे अन्त्य नहुदासम्म मानव जातिले ज्यान गुमाइरहनु पर्ने छ ।
चिनबाट सुरु भएको काेरणा भाइरस अाज विश्वका २०० बराबर देशहरूमा महामारीको रुपमा फैलिरहेकाे छ । लाखौं संक्रमित भइ हजारौंले चिनमा ज्यान गुमाए , लाखौंलाख संक्रमित बनेको छ । यद्यपि खुसीको कुरा चिनमा नियन्त्रण हुने अवस्थामा त पुगेको छ । चिनबाट सुरु भएको काेराना बिश्वका कयौं देश र शक्तिशाली राष्ट्रहरुमा माहामारीका रुपमा दिनानुदिन लाखौंलाख संक्रमित भएका छन । विश्व व्यवस्थामा अर्थतन्त्र विश्वलाई च्यालेन्ज गर्ने चिन काेराेनालाई जितेर अाज विश्व समुदायलाई सहयोग गर्ने महाअभियानकाे नाइके बनिरहेको छ । हजारौंले ज्यान गुमाइरहेका छन । बिश्व ठुलो भयावह तथा तरंगित बनेको छ । पछिल्लो चरण इटालीमा ज्यान गुमाउनेकाे संङ्ख्या उल्लेख्य बृद्वी भएको छ । काराेनाकाकाे विषयमा विभिन्न बहसहरु अध्यनहरु पनि भइरहेका छन ।
विश्वमा तरंगित महासकंट निम्त्याएकाे काराेना नेपालमा पनि अाइपुगेकाे छ । खुसीको कुरा अहिलेसम्म कसैले ज्यान गुमाउनु परेको छैन ।W H O का अनुसार पनि नेपाल उच्च जाेखिममा छ । काराेना लाग्न नदिन सचेतना अपनाउन विभिन्न देशहरूले पनि उच्च पहल कदमि लिइरहेका छन । नेपालमा पनि नेपाल सरकार ,विभिन्न संघसंस्था , राजनीतिक दल , कयौं स्वतन्त्र व्यक्तित्व हरु पनि लागेका छन । सरकारले विभिन्न कदमहरु चालेको छ । यसमा आम नागरिकहरु पनि सचेत बनेका छन र सचेत बन्नु अपरिहार्य बनेको छ ।
नेपाल काेराना संग लड्न कति सक्छ कतिसम्म सफल हुन्छ त्यो भविष्यले निर्धारण गर्नेछ । हाम्रा उपलब्ध प्रविधि , प्रयोगशाला र डाक्टरहरुकाे भुमिका कस्तो रहन्छ । सामना गर्नु साझा चुनाैती बनेको छ भने यसको निराकरण गर्नु साझा सर्वपक्षीय एकताको जरुरी बनेको छ । याे एउटा महाविपत्ति हाे यसको सामना गर्ने कयौं क्षेत्रमा रहेका नागरिकको पहल कदमी लिनु जरुरी भएको छ । याे सचेत मानवीय कर्म हुनेछ । तर पनि थुप्रै किसिमका चुनाैतिहरु अाएका छन । विश्व अक्रान्त दुःखित बन्न पुगेको छ । हामी पनि एउटा नागरिकको सवालले भावविह्वल बनेका छाै , गम्भीर छाै ।
हाम्रो देशमा स्वास्थ्य उपचार आज नागरिकको पहुँच भन्दा बाहिर छ ।आज गाउँका नागरिकहरु सामन्य ज्वरो रुघाखोकीकाे कारण सिटामाेल नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ । नागरिकको स्वास्थ्य प्रति राज्य उदासिन, खवर छ । नागरिक स्वास्थ्य पहुच भन्दा बाहिर त छन पहुच भित्र भएका पनि पैसाको अभाव छ । आजका दिनसम्म पनि मानवीय चेतना वृद्धि भएको छैन । कयौं रुढीबादी परम्परा कुसंस्कारमा जेलिएका गाउँमा मान्छे बिरामी हुदा धामीझाँक्री गर्ने प्रचलन कायमै छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म काेराना संक्रमित काे परिक्षण एक ठाउँमा मात्र भइरहेको छ । राज्यले डाक्टरहरुकाे सुरक्षा सहितको प्रविधि सहित उच्च मनाेवल ठुलो जाेखिमकाे सामना गरेका डाक्टरहरु परिचालनकाे पनि सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने भएको छ । गाउँ दुर दराज जहा माेटरबाटोहरु पुगेका छैनन् । राज्यको पहुच छैन । त्यसको सामना गरेर कसरि राज्यले कसरी पहल लिन्छ । मान्छेहरुमा सर्ने तरिका , लक्षण , बच्ने उपायहरुकाे विषयमा कसले बुझाउने ? काेरनाकाे संत्रास बढेसंगै देशका विभिन्न शहरबाट विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहेका नागरिक केही दिन गाउँ फर्कन लहर चल्यो । स्वाभाविकै रुपले अाफु जन्मेको ठाउँ गाउँ सबैकाे प्याराे हुन्छ । तर गाउहरु सुरक्षित भने छैनन ।
गाउँ र सहरकाे सम्बन्धमा व्यापक वृद्धि हुदा अावातजावात बढेको छ । विभिन्न देशबाट नागरिकहरु पनि गाउँ छिरेका छन । गाउहरु उच्च जाेखिममै छन । अनि गाउका मान्छेहरुलाई थाहा छैन क्वारेन्टाइन र लकडाउनका बिषयमा बेखवर भई उनी घाँस -दाउरा र मेलपातमा व्यस्त छन ।
नेपाल का लाखौंलाख मानिसहरू छिमेकी देश तथा खाडीका मुलुकहुरुमा विवशताकाे जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यहीँ ठुलो आयातित रेमिट्यान्स मार्फत दलालहरुकाे जीवन चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ती नागरिकको विषयमा राज्यले के गर्ने सक्छ । याे अवधिमा कयौं नागरिक भारत तथा अन्य मुलुकबाट नेपाल प्रबेश गरेका छन । उनिहरु खुलियाम गाउँ घुमिरहेका छन ।
केही मान्छेहरुले यति धेरै समवेदनाकाे घडीमा गम्भीर हुनुका सट्टा दशै तिहारमा झैं जम्मा हुने हल्ला गर्ने ,जाँड खाने र जुवा खेल्ने काम भइरहेको छ । सरकारले चिनबाट हेलिकप्टर चार्टर गरेर पढ्न गएका विद्यार्थीहरु नेपाल ल्यायाे तर सिमाना बन्दकाे सुचना नपाउँदा भारत पुगेका नेपाली अलपत्र परेका छन । सुनियो झडप भयो , लाठीचार्ज गरियो ,नेपालगन्ज क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपाली पर्खाल बाट भागे । राज्यले बुझाउन सकेन वा नागरिकले बुझ्न चाहेनन् विषय गम्भीर बनेको छ । याे संकटको राज्य र आम नागरिक जिम्मेवार बनेर चुनाैतीकाे सामना गर्नेु पर्ने भएको छ ।
याे संकटको समय हाे । यसमा आम नागरिक र राज्य त जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।संगसंगै मिडिया पनि जफावदेहि जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको छ । केही अनलाइन मिडियाहरु अपुष्ट समाचारहरु अनाधिक्रित ढंगबाट सम्प्रेषण गरिरहेका छन । केही मान्छेहरु पनि अपुष्ट समाचार तथा केही गैरजिम्मेवार मान्छेहरुले प्रयोग गर्ने सामाजिक संजालमा पाेष्ट तथा सेर गरेका अनावश्यक आतंकित हुने , हतास ,मनाेबल कमजोर बनेको छ । संकटकाे सामना गर्ने उच्च मनाेबल तथा अटुट मानवीय एकताको खाँचो परेको छ । केही मान्छेहरु प्रचारवाजिमा लागिरहेका छन ।याे संकटको समयमा सहयोग गर्नु र आफु पनि सजग हुनु त मानवीय धर्म हाे । तर केही मान्छेहरु दुईवटा मास्क वितरण गर्ने फेसवुक भित्ताहरुमा देखाउन दाैडिरहेका छन । सहि घटनाक्रमहरु र जनतामा सचेतना दिन आम मिडियाहरु जिम्मेवार बन्नुपर्ने भएको छ ।
यतिबेला बिश्व असह्य शाेक पिडाकाे सामना गर्दै देशको अर्थ, शिक्षा र राजनीतिमा पनि चुनाैती सामना गरेको छ । याे वेला सचेत संकल्प गर्नु सट्टा याे समवेदनशीलता केही मान्छेहरु ठुलो अवसरकाे रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन र गर्ने तयारीमा पनि छन । मास्क , औषधि , खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका दैनिकी उपभाेग्य वस्तुको मुल्य वृद्धि गर्ने , बजार अभाव देखाएर कालाेबजारि जस्तो अमानवीय क्रियाकलापमा लागेका छन । विभिन्न एनजीओ तथा संघसंस्थाहरु डलर पचाउन केहि देखावटी प्रचारमा लागेका छन । अनि हाम्रो देशको राजनीति कुसंस्कारयुक्त , दलालिकृत र भ्रष्ट राजनीतिमा परिणत भइ आम मान्छेकाे वितृष्णा पैदा भएको छ । केही मान्छेहरु याे अवसरमा राजनीति मार्फत धनसम्पत्ति कुम्ल्याउने ध्याउन्नमा लागेका छन ।
याे एउटा राेग महामारीको विपत्ती हाे । हाम्रो देशले बाढी ,पहिरो तथा महाभुकम्पकाे पनि सामना गरेको छ । २०७२ मा भुकम्पमा राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुनुका साटो त्रिपाल र जस्तापाता आफ्नो आफ्नो घरतिर कुदाउने काङ्ग्रेसी रामशरणका इतिहास पनि उदाहरण छन । अहिले पनि विभिन्न काेष खडा गरेर प्रचारप्रसारका नाममा विभिन्न जनताको आयातित रेमिट्यान्स दुरुपयोग गर्ने केही नेताहरु रातदिन कसरत गरिरहेका छन ।
देशमा विभिन्न रुपमा दिनभरि काम गरेर मात्र बेलुकी हातमुख जाेड्नेहरुकाे ठुलो संङ्ख्या कायम छ । विश्वमा छाएको महामारी भन्दा उनिहरुलाइ आफ्नो जीवन गुजारा चलाउने कुरा प्रमुख बनेको छ । देशमा काेराना राेकथामका निम्ति सरकारले विभिन्न कदमहरु चालेको छ । सम्मानयाेग्य कामहरू मध्ये लकडाउन काे घाेषणा गरि कार्यनयन भइरहेको छ । राज्यले विपन्न वर्गको दैनिकी जिवनमा पनि उचित ध्यान दिनु जरुरी बनेको छ । आ – आफ्नो ठाउँबाट मानवीय समवेदनामा मलिम लगाउने प्रयासमा लागाै ! काेराेना विरुद्ध उच्च मनाेवल सहित लडाै ! विश्वास गराै , सफल हुनेछौं ।……..
१२चैत्र २०७६ । सल्यान ।
(लेखक विप्लव निकट अखिल (क्रान्तिकारी) सल्यानका पुर्व अध्यक्ष तथा युवा नेता हुन ।)
यो पनि :- कोरोना भाइरसबारे ‘शुभ समाचार अभियान’
लेखक विप्लव निकट अखिल (क्रान्तिकारी) सल्यानका पुर्व अध्यक्ष तथा युवा नेता हुन ।